IHuawei Mate 30 iya kuziswa ngoSeptemba 19 | I-Androidsis
Kwezi veki sele sidibene ngokuvuza okuninzi kwiHuawei Mate 30, isiphelo esiphezulu esilandelayo sophawu lwesiTshayina. Bane iinkcukacha ezivuzayo malunga neekhamera zezi fowuni zimbini. Ukongeza, kulindeleke ukuba basebenzise iprosesa entsha ye-Kirin ngaphakathi, eyayinamahemuhemu okuba yi-Kirin 985, nangona sinokulindela imodeli eyahlukileyo.
Kukho iinkcukacha ezintsha malunga nezi Huawei Mate 30, ezisazisa malunga nokuqaliswa kwayo okanye umhla wokwenza intetho. Ukongeza, basinika iinkcukacha malunga neprosesa abaya kuba nayo ngaphakathi, eya kuthi ibe yiKirin 990, akukho 985 njengoko bekukhankanyiwe ukuza kuthi ga ngoku kwi-Intanethi.
Kubonakala ngathi esi siphelo sophawu lwesiTshayina yayiza kwenziwa ngoSeptemba 19 ngokusemthethweni. Kude kube ngoku, amarhe abonakalisile ukuba ezi Huawei Mate 30s ziya kufika phakathi kukaSeptemba no-Okthobha, ke oku kuvuza kuhambelana kakuhle noko besikade sikuva malunga neefowuni.
Kwelinye icala, bekukho iindaba ezininzi malunga neprosesa esiza kuyifumana kolu luhlu luphezulu. Nangona kubonakala ngathi uphawu lwaseTshayina ngoku lubheja kwiKirin 990. Into esingayaziyo kukuba yiprosesa efanayo, kodwa inegama elahlukileyo okanye yenye yeetshipsi. Ukusukela kutshanje kwavakaliswa ukuba Iza kumilisela iiprosesa ezimbini zokugqibela ezivenkileni.
Ngayiphi na imeko, kubonakala ngathi kuqinisekisiwe ukuba ezi Huawei Mate 30 izakufika ngokuhambelana ne5G. Ngelishwa, azikho iinkcukacha ezininzi kakhulu ezityhiliweyo ukuza kuthi ga ngoku, kodwa siyaqhubeka ukubona iimveliso ze-Android ziya kwi-5G kwiifowuni zazo eziphezulu. Kule meko iprosesa iya kuba nemodem yayo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba yinyani, kwisithuba nje esingaphezulu kwenyanga siya kuba nakho ukuhlangana nezi Huawei Mate 30 ngokusemthethweni. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina, esaziwa njengesithsaba njengenye yezona zidumileyo kweli candelo lentengiso. Kunomdla omkhulu kwezi modeli, ke siya kuzimamela iindaba ezintsha malunga nazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei Mate 30 iza kufika ngoSeptemba iprosesa entsha
UXiaomi uqala ukukhupha i-beta yoluntu ye-Android Q ye-Mi 9 kunye neRedmi K20 Pro